Abantu abaningi namuhla bakholelwa ukuthi kwanele unomzimba omuhle ukuba anqobe Olympus inkanyezi. Nokho, lokhu akunjalo, main namanje ithalente. Futhi uma usaziwayo has futhi ephelele idatha yangaphandle, khona-ke nakanjani impumelelo.
Granovskaya Hope biography okuyinto ufana bonke ajwayelekile Cinderella indaba - ubufakazi. Ordinary Ukrainian yesifundazwe, kokuya, ophoqelelwe ezinhliziyweni zabantu ezinzima sika Flutter, fade ajabulile. Owesifazane buthule baba nomona ngaye futhi intsha babelingana kuso.
Wazalelwa Granovskaya Hope biography iyathakazelisa eziningi abalandeli bakhe, April 10, 1982 edolobhaneni Zbruchivka (Khmelnytsky esifundeni, Ukraine). Uyise manzi té, ngakho umndeni wayempofu futhi ukubuyisa. Nokho, lokhu akubavimbeli yakhe ukuba abe nesithakazelo umculo we-classic, uwabuka kwi-TV ballet. Khona-ke lo mkhaya uthuthela Volochisk, lapho Nadia kuphothula esikoleni esiphakeme.
Nadezhda Granovskaya, biography nezwi egcwele imishwe emhlophe futhi omnyama, kwakunzima ukuthi amaphupho abo. Wafunda ngesikhathi Khmelnitsky Pedagogical College (Faculty of nobuciko bokusina nomculo imfundo), bese ekhatsi Kiev (College. Ushinsky).
Ajwayelane Valery Meladze, ngubani babuka e-Ukraine, kwenzeke Khmelnitsky: umculi wenziwa ethiyetha, lapho esebenza khona njengoba Nadia. Kusukela kuye yena Wathola ukuthi uConstantine wakha iqembu elisha bese ubamba ekusakazeni. Meyher ahlelwe amateur photo shoot wakhe bese uthumela ku umkhiqizi. Yashaya ukubukeka waweyisa Kostiuk Meladze, wona wammemela intombazane kusampula. Lena yindlela ingxenye yokuqala iqembu super othandwayo "VIA Gra", okuyinto, ngaphandle Nadi, kufakwe Alena SaseVinnitskaya. Lokhu duo, trio bese yanqoba hhayi kuphela Ukraine lwakubo, kodwa futhi Russia namanye amazwe CIS.
Granovskaya UNadezhda kabani biography buhlobene eduze leli qembu, kuye kwaba negalelo show ibhizinisi ukuhlukanisa, emisha, eshona singene umphefumulo, uqhathanisa kahle nezinye. ingoma yakhe yokuqala "VIA Gra" onesihloko esithi "Ukuzama №5" baba hit elingenakuphikwa. Ngemva kwesikhathi esithile, emva ukusebenza kanzima iqembu Nadia kwadingeka zihambe: wayekhulelwe. Nokho, labuyela ngenyanga ngemva kokubeletha, ekubuyiseleni ezakheke wangaphambili. Imfihlo sisuke sithi ngenxa iqhaza Meyher iqembu mncane kakhulu: ubuhle ke yafuna imihlatshelo.
Ithemba Meyher-Granovskaya, biography okujabulisa umuntu ngamunye wasebenza eqenjini iminyaka emihlanu, njengoba umhlanganyeli yayo unomphela. Ngesikhathi esifanayo, ukubunjwa "VIA Gra" washintsha ngokuphindaphindiwe. Kodwa ngo-2006, washiya, futhi Nadia - ngaphandle kokungabaza, amahlazo at esiqongweni ukuthandwa yayo. Kuye kwakushintsha isithombe, ezinikezela indodana yakhe yasekhaya, wazama isandla sakhe njengoba umethuli. Futhi ngo-2009, umdwebi ubuyela isikhalazo ubulili we trio.
Granovskaya Hope biography ibuyekezwa kulesi sihloko, ungowesifazane ekhuthele kakhulu. Wenza e musicals, kuyinto ethandwayo ye-TV show, wokukhulisa indodana yakhe hhayi kuphela, kodwa indodakazi. Sifisa impumelelo yakhe enkulu, ugqozi kanye nenhlalakahle, kanye injabulo zesifazane esikhulu, futhi babheke phambili imiklamo emisha, izingoma ezintsha, highs ezintsha.